२६.५७% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि श्री इन्भेष्टमेन्टको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » २६.५७% बोनसमा मूल्य समायोजनपछि श्री इन्भेष्टमेन्टको कतिमा खुल्यो सेयर कारोबार ?
काठमाडौं - श्री इन्भेष्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीको २६.५७% बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । बोनस सेयर समायोजनपछि कम्पनीको सेयर भाउ प्रतिकित्ता १६७.५ रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीको सेयर कारोबार समायोजित मूल्यलाई आधार मानेर कारोबार खुलेको छ । यसको औसत आधार मूल्य २३४.२५ रुपैयाँ छ ।
कम्पनीले असार २२ गते हुने साधारण सभा प्रयोजनको लागि सोमबारदेखि बुक क्लोज गरेको हो । सभामा २६.५७% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश हुँदैछ । हाल श्री इन्भेष्टमेन्टको चुक्ता पुँजी ६३ करोड २१ लाख ७१ हजार ४३२ रुपैयाँ छ । बोनस वितरणपछि पुँजी ८० करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।